Kordhinta: yaa u baahan kala-sooc hore iyo sababta - Nidaamka Baradhada
TOMRA 3Xalitaanka kala-soocidda baradhada adoo TOMRA Food_1
Dhaqanka kala-soocidda horudhaca ah ee alaabada la goostay weli kuma baahin shirkadaha beeraha Ruushka iyo shirkadaha warshadaha cuntada. Si kastaba ha noqotee, xaaladdu si dhakhso leh ayey isu beddelaysa, inbadan oo kaqeybgalayaasha suuqa ahna waxay bilaabayaan inay soo bandhigaan wax u dhigma silsiladahooda wax soo saar iyo, guud ahaan, waxay si firfircoon u xiiseynayaan xalalka hirgelinteeda.
Kala-soocidda hore waa kala soocida aasaasiga ah ee alaabta. Marka laga hadlayo ganacsiga beeraha, waxaa si toos ah looga fulin karaa garoonka dhexdiisa iyo ka hor inta aan la keydin badeecada si loo keydiyo ama loo diro gaadiid dheeraad ah. Marka laga hadlayo warshad wax soo saarta, soosaarida inta badan waxaa lagu dhaqmaa heerka laga helayo alaabada alaab-qeybiye.
Xaalad ahaan, waxaad ka fiirsan kartaa inaad u maleyso baradho adoo adeegsanaya sorter TOMRA 3A... Sixir cusub TOMRA 3A shirkadda TOMRA Food - hogaamiyaha adduunka ee horumarinta iyo soo saarista tikniyoolajiyada iyo xalalka kala soocida wax soo saarka cuntada - waxaa markii ugu horeysay la soo saaray dayrta 2019. Waxay ku habboon tahay shaqada labadaba si toos ah duurka iyo iyada oo qayb ka ah khadadka wax soo saarka oo dhammaystiran gudaha aqoon isweydaarsiga.
Ku riixitaanka shirkad beeraha: dagaalka santimitir laba jibbaaran
Kala-soocidda hore ayaa caan ku ah beeraleyda baradhada ee suuqyada Yurub iyo Mareykanka. Tani badanaa waxay sabab u tahay shaqada joogtada ah ee shirkadaha maxalliga ah si loo yareeyo kharashka, maadaama badanaa suuqyada aadka loogu tartamo tani ay tahay habka kaliya ee lagu kordhin karo faa'iidada ganacsiga.
Tusaale ahaan, horay-u-duurka goobta adoo dejinaya TOMRA 3A waxay awood u leedahay inay si buuxda u xalliso dhibaatada ka saarista meydadka shisheeye dalagga: xinjirowga dhulka, burburka, dhagxaanta waxaa loo ballan qaadayaa inaysan ku dhicin kaydinta ama weelka gaadiidka ee gaadhiga. Tani waxay xaqiijineysaa hoos u dhaca qiimaha caanka ah: shirkaddu waxay joojineysaa keydinta ama rarida dhagxaanta halkii laga heli lahaa baradhada. Marka mahadsanid horay-u-kala-soocista adoo rakibaya TOMRA 3A waxay maamushaa inay yareyso meelaha lagu keydiyo qashinka 15 ilaa 20%. Haddii aan tixgelinno tirooyinkan iyadoo la tixraacayo shirkad weyn oo beeraley ama xitaa dhexdhexaad ah, soo-jeedintu waxay isu beddelaysaa mid la yaab leh marka la eego lacagaha.
Soosaarida Warshadda Soosaarida: Caymiska Kahortaga Dayactirka Qiimaha Badan
Ruushka dhexdiisa, kala-soocidda ayaa caan ku ah inta badan soo saarayaasha cuntada. Tani maahan wax lala yaabo, maxaa yeelay iibsashada sixir gooni ah ujeeddooyinkan waxay ku lug leeyihiin kharashyo qaarkood, kuwaas oo ay u badan tahay inay awoodaan shirkadaha waaweyn ee wax soo saara oo horayba u maal galiyay qalabka. Oo halkan presorting sida habka farsamada xalliyaan laba dhibaato hal mar.
Marka hore, iyadoo la kaashanayo soo-dejinta, shirkaddu waxay si fudud u hubisaa in alaabada ceeriin ee la keenay ay buuxiso shuruudaha loo baahan yahay. Ma aha wax qarsoodi ah in soosaarayaasha wax soo saarka cuntada, sida jajabyada baradhada, ay leeyihiin shuruudo adag oo adag oo loogu talagalay baradhada la keenay. Shuruudahaan waxaa laga yaabaa inay la xiriiraan noocyada kala duwan, cabirka digriiga, midabka, iwm. TOMRA 3A waxay awood u leedahay inay si fudud u kala soocdo, tusaale ahaan, digriiga cagaaran. Marka, shirkaddu way ka takhalusaysaa kharashaadka la xiriira baahida loo qabo bixinta kharashka alaabta ceyriinka ah ee aan buuxin tilmaamaha.
Marka labaad iyo, laga yaabee, tan ugu muhiimsan, iyada oo gacan laga helayo kala-soocidda hordhaca ah, shirkaddu dhab ahaantii waxay iska hubinaysaa waxyeellada iyo dayactirka soo socda ee qalabka qaaliga ah ee lagu rakibay khadka wax-qabadka. Ka dib oo dhan, haddii, halkii digriiga baradhada, dhagax uu si kama 'ah ugu dhaco mashiinka jarista, cawaaqibta waxay noqon kartaa mid aad u xun, illaa waqti-dhimis muddo dheer ah ee khadka oo dhan. Sunta aagagga, oo si toos ah loogu rakibay qadka farsamaynta hortiisa, waxay baabi'isaa halistaas.
Dabcan, cabirka shirkada waa in markale la tixgaliyaa. Tusaale ahaan, tusaalaha yar TOMRA 3A waxay awood u leedahay in ay maamusho ilaa 50 tan oo baradho saacadiiba, halka midka hore uu horeyba u ahaa 100 tan. Iyadoo la raacayo, heerka lacag celinta ee qalabkan waxay si toos ah uguxirantahay mugga alaabada la warshadeeyay.
Waa su’aale waqtiga
Horeba maanta shirkadda TOMRA Food waxay qabataa dano la taaban karo oo iyaga ku saabsan xallinta xalka, oo ay kujirto si toos ah soo-saarka, dhinaca shirkadaha beeraha Ruushka iyo shirkadaha warshadaha cuntada. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijyada ijaarka ayaa sii faafaya, taas oo u oggolaaneysa in la wanaajiyo culeyska dhaqaale ee la xiriira iibsashada qalabka kala soocida. By habka, gaarsiinta ugu horeysay ee kala soocida duurka ku ool ah waxaa loo qorsheeyay dayrta this. TOMRA 3A macaamiisha Ruushka.
In ka yar ama ka yar baahinta wax ka sheegista suuqa Ruushka runti waa arrin waqti ku xiran. Waxay si toos ah uguxirantahay biseylka iyo daahfurnaanta suuqa, iyadoo rabitaanka kaliya ee aan weyneyn, laakiin sidoo kale ciyaartooyda dhexdhexaadka ah ay "ciyaaraan waqti dheer", oo leh awooddooda maalgashiga cabsi la'aan, iyagoo ku dhisaya wareegyo dib-u-celin shan-iyo-toban sano ah. Waa wax lagu farxo in la fahmo in suuqa gudaha uu u socdo jihadaas.
Tags: TOMRA Foodkala-soocida alaabada
132,1 kun tan oo baradho ah ayaa laga qoday gobolka Tver